7 Istaraatijiyad Lagu Kordhiyo Ka Qeybgalka Instagram | Martech Zone
Axad, Juun 23, 2017 Monday, July 24, 2017 Douglas Karr
Macaamiisha doonaya inay kordhiyaan wacyiga oo ay u koraan bulshada raacsan, suuq geynta muuqaalka sida Instagram ayaa horseeday xirmo ku saabsan hawlgelinta. Xaqiiqdii, 70% dadka isticmaala #Instagram waxay ka eegeen astaan ​​madal, iyadoo 62% dadka isticmaala ay raacayaan sumad
Infograafigani ka yimid M2 Sugid waxay bixisaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka, fursadda, aasaaska aasaasiga ah iyo xeelado 7 oo kaa caawinaya inaad ku gaarto yoolalkaaga suuq-geynta barta Instagram:
Soo bandhig alaabadaada ama adeegyadaada - Dhawaan waxaan dhameeyay mashruuc aan ku biirinayo goobo badan khariidadaha Google, qolalka, iyo astaamaha kale barta. Waxaan la wadaagay a shaashada on Instagram. Ma ahan inaan filayo in taleefanku qarxi doono, laakiin waxaan dooneynaa dadka naga dambeeya ee na soo raaca inay arkaan awooddeenna.
Dhis bulshadaada - Instagram waxay bixisaa xoogaa qalab ah oo raaca oo aad uga faa'iideysan karto. Xiriirinta Facebook ayaa lagu dhawaaqay iyo sidoo kale dadka kugula socda Instagram. Maskaxda ku hay in Instagram ay xad u leedahay inta qof ee aad raaci karto, marka marka aad halkaas gaarto - waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo xisaab-celinta aanad la macaamilin.
Kordhi ogaanshaha astaantaada - Haa, wax yar ayaan u dhaqaaqi doonaa dhanka bidix ama midig si aan astaanteyda ugu dhex toogto. Dhab ahaan, haddii aad sawir qaadeyso, maxaa diidaya? Aragtida muuqaalka ee summaddu run ahaantii waxay ka caawineysaa meheraddaada inay dhisaan kalsooni. Dabcan waad awoodi kartaa inaad xoogaa dul mariso - laakiin xulasho yar oo sawirro sumad leh ayaa ku fiican barta Instagram.
Soo bandhig dhaqanka shirkadda - Waxaan taageernaa tan dhacdooyin, goobo, faa'iido la'aan ah, iyo bilaabitaanno ka socda beesheena, sidaas darteed waxaan jecel nahay inaan ku soo bandhigno koontadayada 'Instagram'. Waxaan sidoo kale jecel nahay eeyaha iyo bourbon… waxaad ka heli doontaa kuwa Instagram-ka sidoo kale.
Ku xayeysiiso macaamiisha mustaqbalka - Si daacadnimo ah uma aynaan arkin wax badan oo toos u beddelid toos ah adoo adeegsanaya xayeysiin muuqaal ah, laakiin waxaan jecel nahay inaan ku wadaagno kanaalka kana faa'iideysano waxyaabaha ugu sarreeya In kasta oo dadku aysan dejineynin kulan iib ah annaga, waxay naga soo dejinayaan dammaanad.
Hagaaji daacadnimada sumadda - Ma hubo in noocyadayadu ay aad u ballaaran yihiin daacadnimo waa arin, laakiin waan ku qanacsanahay marka dadwaynuhu jecel yihiin wax soo saarkyaga, adeegyadayada, shuraakadayada, macaamiisha, dhacdooyinka, iyo ganacsiga kale ee aan qabanayno. Ma hubo sida ay waxyeello noo gaarsiin karto!
Ku cusbooneysii Instagram warka shirkadda - Xusuus ma ku heshay wararka? Qaado shaashad weyn oo la wadaag bulshadaada. Sheegashooyinka ka imanaya dhinacyada saddexaad waa xaqiijinta awooddaada internetka.
Waxaa laga yaabaa inaan jebinayo xeerarka (sida aan caadada u ahay), laakiin waxaan leeyahay hal Koontada 'Instagram' oo isku dhafan noloshayda shaqsiyeed iyo ganacsi ahaanba. Waxaan jeclahay inaan noqdo mid hufan oo aan noloshayda kula wadaago barta 'Instagram, waxayna sii wadaa inay hesho falcelin weyn. Waxaad ka heli doontaa jacaylka aan u qabo reerkayga, eeygayga Gambino, ganacsigeyga, dhacdooyinka aan xaadiro, iyo - dabcan - waxaad ka heli doontaa xoogaa rushaynta bourbon weyn oo isku xidhan.
Tags: Instagramhawlgalka instagramxog -ogaalka instagramsuuq-geynta suuqatalooyinka suuqgeynta instagramm2 hakad
Podcast-ka Wax Cusub ee Cusub: Oo Marti Lagu Yahay Douglas Karr